Budata Zeyno's World APK maka Android
Budata Zeyno's World
Budata Zeyno's World,
Zeynos World bụ egwuregwu egwuregwu egwuregwu nwere ike ịme na ekwentị gam akporo na mbadamba.
Zeynos World, nke onye nrụpụta egwuregwu Turkey Fatih Dede mere, bụ egwuregwu na-eme ka ndị egwuregwu banye ọgba aghara nke agba sitere na ojii. Negwuregwu ebe anyị jikwaa agwa aha ya bụ Zeyno nke dabara na mbara igwe ọzọ, ebumnuche anyị bụ imeri ihe mgbochi niile wee laghachi na mbara igwe anyị na ezinụlọ anyị. Maka nke a, ọ dị mkpa iji merie ihe mgbochi siri ike ma merie ndị iro niile anyị na-ahụ. Ọzọkwa, ka anyị na-eme ihe ndị a, anyị aghaghị iburu akụ̀ zoro ezo nuche.
Egwuregwu ahụ, nke na-ejikwa ihe ndị dị nelu ikpo okwu nke ọma, na-achịkwa ịme egwuregwu na ịmanye ha. Tinyere akụkụ ndị a haziri nke ọma, anyị nwere egwuregwu na-aga nke ọma nihe gbasara àgwà eserese. Nezie akwadoro maka ndị na-achọ egwuregwu na-egwu na gam akporo.
Zeyno's World Ụdịdị
Mmepụta: Ferhat Dede